ဒီတပတ် စနေ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင် ဟောပြောပွဲရှိတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ဒီတပတ် စနေ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင် ဟောပြောပွဲရှိတယ်
ဒီတပတ် စနေ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင် ဟောပြောပွဲရှိတယ်
Posted by Good Idea on Aug 5, 2011 in Celebrity |9comments
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်ကြီးများနဲ့ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် – UMFCCI (အမလေး နာမည်ခေါ်ရတာလည်း ရှည်လိုက်တာ။ ရထားတောင် မှီပါ့မလား) ကနေ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဟောပြောပွဲတွေ လတိုင်းရဲ့ ပထမပတ် စနေနေ့တွေမှာ ကျင်းပပေးနေပါတယ်တဲ့။ (သူတို့ ပြောတာပဲ)။
ဒီတပတ်တော့ NLD မှာ ဟောပြောမယ်လို့ ပွဲစီစဉ်ပြီးကာမှ မပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်က ဟောပြောပါလိမ့်မယ်။ ဟောပြောပွဲက မနက်ဖြန်နော်။ ဖိတ်ကြားစာကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။ နားထောင်ချင်သူများ သွားကြပါ။ နားမထောင်ချင်သူများ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြပါ။
We request the pleasure of your company at the seminar on
” Making Democracy Work ”
Asso; Prof. Dr.Kyaw Yin Hlaing
Date : 6th August (Saturday)
Venue : UMFCCI (Head Office), No(29), Min Ye` Kyaw Swar Street, Lanmadaw Tsp , Yangon.
UMFCCI မှာ ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်နေပေးနေတာ ကြာပါပြီ။ ဆရာ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် ပွဲတွေကိုတော့ မကြာခဏ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတလောကတောင် စာရေးဆရာမ ဂျူး ဟောပြောလိုက်သေးတယ်လို့ သတင်းရမိပါတယ်။ ၀င်ကြေးက တယောက် (၁၀၀၀၀) ကျပ်လို့ သိရပါတယ်။
၀င်ကြေးပေးရတဲ့ပွဲဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူး။ ၀င်ကြေးအတွက် အရင်ရှာရဦးမယ်ထင်တယ်။ ၀င်ကြေးမပေးရတဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ ပြောပြပါနော်။
တခြားသူတွေရဲ့ ပွဲတွေ ၀င်ကြေးပေးရ၊ မပေးရ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာမ ဂျူး ရဲ့ ပွဲကတော့ (၁၀၀၀၀) ကျပ်လို့ ပြောတာပါ။
ကျုပ်တို့ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာလုပ်တဲ့.. စာပေဟောပြောပွဲများ.. ၁၀ဒေါ်လာဆိုပြိး ၀င်ကြေးတောင်းရင်.. အရိုက်တောင်ခံရမလားမသိဘူး..။
အခုလုပ်နေတာက.. မုန့်ပါအလကားကြွေးပါမယ်ဆိုပြိး.. ခေါ်နေကြတာလေ…
အဲဒါနဲ့.. ဘ်ိုတွေပြောတာများ ကြိုက်မလားဆိုပြိး.. မြန်မာဘုရား၊စေတီသမိုင်းတွေရေးတဲ့.. ဘိုကြီးတယောက်ဖိတ်ဟောခိုင်းမလို့ တီးခေါက်ကြည့်တာ…၊
သူကြီးရေ…. စိတ်ဝင်းစားတဲ့သူတွေခည့်ဖိတ်ပြီး၊ round table discussion လုပ်ကြည်ပါဗျာ…။ seminar fee လဲကောက်ပေါ့။ စနစ်တကျ လေးပါဖြစ်ရင်….media slide showတေါပါပါရင်ပိုမြိုင်ပေါ့။
ငါးလုပ်ငန်းရှင် အသင်းဘုရင့်နောင်မှာလည်း ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်ပါတယ် .. ၀င်ကြေးကတော့ အခမဲ့ပါတဲ့ရှင် ။
ရွာထဲက တစ်ယောက်လောက် ဆွေးနွေးပွဲသွားပြီး … ပို့စ်ပြန်တင်ပေးနိုင်လျှင် အတော် အကျိုးများမှာပါပဲ ။
UMFCCI က ဟောပြောပွဲက ဝင်ကြေးက ဒီလောက် ဈေးကြီးလား။ ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်မှာလည်း အခါအားလျှော်စွာ ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်တယ်။ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တောင် ကျွေးသေးတယ်။ အနည်းဆုံး ရေသန့်တစ်ပုလင်းတော့ ရတယ်။ ဒီတစ်ခါ ဟောပြောပွဲရှိမှ ကြိုတင်အကြောင်းကြားမယ်။